Mormiin Oromiyaa keessatti ka’e diinagdee biyyattii burkuteessuuf deema jedhame – Awash Times
Mormiin Oromiyaa keessatti ka’e diinagdee biyyattii burkuteessuuf deema jedhame
November 22, 2020 Malka Wabe Uncategorized One comment
Guyyoota muraasa dura qeerroon Oromiyaa keessatti yaamicha mormii gochuun niyaadatama. Haaluma kanaa keessattuu Baha fi kibba akkasumas jiddu gala keessatti karaa cufuuf sochii diinagdee ugguruu eegalamee jira. Idoowwan kaanittis suuta walgahaa jira.
Mootummaan waraana Tigray irratti labseen humna qabu hunda gara kaabaa qajeelchee jira. Kuni humna waraanaf diinagdeetis jechuudha.
Yeroo biyyattiin rakkoo adda addaatin hudhamtee jirtu kanatti mormii dhaabun ulfaatadha. Dabalataanis diinagdeen biyyattii salphaattii burkutaahuu danda’a jedhu hayyoonni diinagdee.
Yeroo ammaa Oromiyaa keessatti iddoo hedduu caasan mootummaa kan diigamaa jiru hoo ta’u ummanni gibiraaf qaraxa mootummaan hinjiru jedhee kaffaluu didaa jira. Hojjettoonni mootummaatis carraa argataniin saamaa jiru.
Oromiyaan diinagdee Itiyoophiyaa harka 70 kan maddisiiftu waan ta’eef mormiin Oromiyaa keessatti deemu kuni dinagdee biyyaa dugda kuta jedhu ogeessonni. Jmmannis waan as deemuu waan hinbeeknef waan harkaa qabu gabaa baasuu dhiisaa jira jedhame.
Previous Post: Haleellan rookkettii magaala Bahir Dar fi Gondar
Next Post: Ethiopia warns civilians of “no mercy” in Tigray offensive
Nuti ummatni oromoo Dr. Abbiyyi fi mootummaa isaani waliin jirra. Nuti lagannaa hiyyuumma male lagannaa gabaas ta’e ugguura diinagdee hin goonu.